80 kun oo Sweden laga masaafurinayo - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Dowladda Sweden oo ku armay hey'addaha dalka in ay u diyaar garoobaan musaafurinta 80 000 oo sharciyada loo diidayo. Foto: TT, montaj: Radio Sweden
80 kun oo Sweden laga masaafurinayo
La daabacay torsdag 28 januari 2016 kl 11.32
Hey’addaha dowladda Sweden ayaa lagu amray in sannadkan kordhiyaan tirada dadka qaxootiga ah ee dalka laga masaafurinayo.
Sida uu ka dhawaajiyey wasiirka arrimaha guddaha Anders Ygeman tirada dalka laga masaafurinaya ayaa ahaan karta 80 000 oo qof oo diidmo laga siinayo dalabkooda magangeliyo, kuwaas oo ay tahay in ay dalka iskaga baxaan.
- Maanta tiro dad ah oo didmo laga siiyey magangeliyadooda ayaa dalka laga masaafuriyaa. Maadaama ay aad u badan tahay tirada qaxootiga ah ee Sweden qaxootiga ka dalbatay, 163 000 ayey aheyd tirada soo gaartay dalka sannadkii hore, tirada ka mid ah kuwaas diidmo ayaa laga siin doonaa dalabkooda, kuwaas oo ay tahay in ay dib u noqdaan, ayu yeri wasiirka arrimaha guddaha.
Ma laga garanayaa tirada dadkas in ay tahay ayaa la weydiiyey wasiirka, waxuuna yeri:
- Maanta qiyaastii boqolkii 55 qaxootiga magangeliyo doonkooda ogalaansha ayaa laga siiyaa, taas oo micnaheeda tahay in tirada loo diido ay u dhaxeyso 60 000 – 80 000 haddii tirada ogalaanshaha a siiyo sidaas sii ahaato, ayuu yeri Ander Ygeman wasiirka arrimaha gudaha Sweden.
Wargeyska Dagens Industri ayaa shalay wareiyey i hey’addaha dowladda howl loo siiyeey in ay u diyaar garoobaan 80 000 oo ruux oo dalka laga masaafuriyo. Sida uu yerina wasiirka arrimaha guddaha Anders Ygeman dadka diidamada la siiyey waxaa marka hore lagu saacidayaa sidii ay iskood Sweden uga baxi lahaayeen. Wasiirka oo ka hadlayey sida laga yeelayo kuwa diida in ay dalalkoodii dib ugu laabtaan waxuu sheegay in kuwaas diyaarado qaas ah loo kireysanyo dal ka masaafuridooda:
- Maantaba diyaarado ayaa loo kireeya dadka la masaafurinayo taas oo qarash ahaanta u wanaagsan markey timaado dalka masaafurinta. Sidoo kale waxaan wado shaqeyn kalo yeelan karnaa arrimahan EU iyo waddamada EU ka midka ah, ayuu yeri Anders Ygeman.
Haddaba miyey jiraan caqabo arrintan ku gudban, wasiirka oo ka jawaabayeyna waxuu yeri:
- Caqabadaha waxay ahaan karaan wadamada oo aan masuuliyad iska saarin muwaadiniintooda. Waxaan wadohadalo kalo yeeshay arrimahan waddamo ku ayaala waqooyiga Africa iyo Afghanistan. Howl-sha ah in ah laga dhaadhaciyo waddamadas in ay qataan masuuliyadda mawaadiniintooda ka saaran ma ahan mid sahlan, ayuu yeri wasiirka arrimaha guddaha Sweden Anders Ygeman.
Waddamada aysan Sweden heshiiska kula aheyd in mawaadiniintodda magangeliyada logaa diiday halkan loo soo ciliyo waxaa ka mid ah Soomaaliya, waddankan oo ay aad u adagtahay in Sweden dad u masaafuriso. Laakiin saas oo ay tahay waxaa jira soomaali badan oo sharicyada Sweden looga diiday oo booliska soo qabto si waddanka looga masaafuriyo.
Cabdiraxiin Axmed Yussuf oo lagu hayo xaruunta dadka la masaafurinayo
13kii bishaan janaayo waxaa goob u dhow Airboorka Göteborg laga qabtay Abdiraxim Axmd Yussuf haddana lagu hayo xaruunta lagu hayo dadka ay tahay in dalka laga masaafuriyo. Abdiraxiim Sweden waxuu soo galay 2008dii, dhowr goor diidamo ayaa laga siiyey kiis magangeliyo doon.
Xabsiyidda Dadka La Masaafurinayo
Boliiska: Tarxiilka ajaaniibta dhibaato ayaa naga heysata